MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - နေလနှစ်ဦး အထူးအစီအစဉ်
ဤစာမျက်နှာသည်နေလနှစ်ဦးအထူးအစီအစဉ်(Promotion)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအားရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ Promotion အား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ Promotion ကို Htut Co.,Ltd. က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။Promotionတွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့်သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
၃.၁ Promotion ကာလသည် ၂၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၉ အထိ (Promotion ကာလ) ဖြစ်ပါသည်။
၃.၂ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် နေလဝန်ဆောင်မှုကို Promotion ကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
၂။ မှတ်ပုံတင်ထားသောMPTအသုံးပြုသူများ (MPT ဆင်းမ်ကဒ်အသုံးပြုသူ) မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် နေလ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူထားသောသူများ(အသစ်/အဟောင်း)သည်ဤအထူးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၄။ Promotion ကာလသည် ၂၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၉ အထိ (Promotion ကာလ) ဖြစ်ပါသည်။
ပထမလ (၂၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉) အတွက် ကျပ် (၁) သန်းတန် စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း နှင့် ၃၀၀၀ကျပ်တန် MPT top-up ကဒ် ၁၀၀ တိြု့ဖစ်သည်။
ဒုတိယလ (၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၃ မတ် ၂၀၁၉) အတွက်ကျပ် (၁) သန်းတန် စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း နှင့် ၃၀၀၀ကျပ်တန် MPT top-up ကဒ် ၁၀၀ တိြု့ဖစ်သည်။
တတိယလ (၂၄ မတ် ၂၀၁၉ မှ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၁၉) အတွက်ကျပ် (၁) သန်းတန် စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း နှင့် ၃၀၀၀ကျပ်တန် MPT top-up ကဒ် ၁၀၀ တိြု့ဖစ်သည်။
ပထမလအတွက်ဆုရရှိသူများ - ၁၄ မတ် ၂၀၁၉
ဒုတိယလအတွက်ဆုရရှိသူများ - ၁၄ ဧပြီ ၂၀၁၉
တတိယလအတွက်ဆုရရှိသူများ- ၁၄ မေ ၂၀၁၉
၉။ ဆုအမျိုးအစားများနှင့်ကံစမ်းမဲပေါက်သူများကိုရွေးချယ်ရန်အပါအ၀င်Pomotionနှင့်ပတ်သတ် သောမည်သည့်အခြေအနေကိုမဆို Htut Co., Ltd. နှင့်MPT တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကသာ နောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် တောင်းဆိုမှုများ၊ စုံစမ်းမှုများနှင့် အပေးအယူများကို ပြုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
၁၀။ Promotion နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင်၀၉၈၉၉၈၄၀၀၀၇ သို့မဟုတ် ၀၉၄၂၀၈၀၅၆၆၇ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
MPT Terms and Conditions –Nay La Initial Year Promotion
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the “Nay La Initial Year Promotion” (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you byHtut Co.,Ltd.By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions andany other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
3.1 The Promotion period is from 24January 2019 to 25 April2019 (“Promotion Period”).
3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the Nay La service during the Promotion Period.
NayLa Initial Year Promotion Terms and Conditions
1. Users can subscribe to the NayLa service using their MPT phone numbers.
2. MPT registered users (using an MPT SIM) who are Myanmar citizens and are Nay La subscribers (new/existing).can participate in the Promotion.
4. The Promotion period is from 24 January 2019 to 25 April 2019 (“Promotion Period”).
1st month (24 January 2019 to 23 February 2019), there will be one winner of one Diamond Ring that worth 1 million kyats and 100 winners of 3,000 kyats MPT top-up.
2nd month (24 February 2019 to 23March 2019), there will be one winner of one Diamond Ring that worth 1 million kyats and 100 winners of 3,000 kyats MPT top-up.
3rd month (24March 2019 to 23 April 2019), there will be one winner of one Diamond Ring that worth 1 million kyats and 100 winners of 3,000 kyats MPT top-up.
1st month winners – 14March2019
2nd month winners – 14 April 2019
3rd month winners – 14 May 2019
10. You may contact 09899840007 or09420805667 for detailed information about the Promotion.
NayLa ပင်မစာမျက်နှာသို့ ►